पोखरामा पर्यटक सोधिरहन्छन्, शौचालय खोई ?
नरहरि पौड्याल पोखरा, १३ असोज
शहरका मुख्य स्थान र प्रत्येक घरधुरीलाई चर्पीको पहुँचमा पुर्‍याउने मानक पूरा गरेको भन्दै सरकारले खल्ला दिसामुक्त नेपाल घोषणा गर्‍याे। तर, सरकारले नागरिकहरूको चाप हुने प्रमुख शहरक चोकहरूमा समेत सार्वजनिक शौचालयको उचित व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।
बजारमा आवतजावत गर्नेहरूले नै एकान्त ठाउँ र झाडीमा छलिएर शौच गर्दै आएका छन् । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराका मुख्य स्थानमा समेत सार्वजनिक शौचालयको उचित व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
पोखराका मुख्य चोक महेन्द्रपुल, बगर, सृजनाचोक, बिरौटा, छोरेपाटन, लेकसाइड, पृथ्वीचोकलगायतका स्थानमा समेत महानगरले सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको छैन । वर्षौंदेखि बसपार्क रहेको पृथ्वीचाेक क्षेत्रमा यात्रुहरू बसबाट झरेपछि शौचालय खोज्दै झाडीतर्फ दौडिने गरेका छन् । कतिपय यात्रुहरूले बसपार्कमै बसमा छलिएर शौच गर्छन् ।
सरकरले यात्रुहरूको बढी चाप हुने बसपार्कमा समेत शौचालयको उचित व्यवस्था नगर्दा सर्वसाधारणले दैनिक रूपमा कष्ट भोग्नु परेको बसपार्कमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका भीमसेन घिमिरेले बताए ।
‘ठूलो संख्यामा बसमा आवतजावत गर्ने यात्रुहरू शौचालयको अभावमा कष्ट भोग्न बाध्य छन्,’ उनले थपे, ‘कोही यात्रुहरू होटलमा शौचालय खोज्दै आउँछन् । कोही एकान्त र झाडी खोज्दै भौंतारिन्छन् ।’
यात्रुहरूको खुल्ला दिशापिसावका कारण पोखराको बसपार्क क्षेत्र निकै दुर्गन्धित र संक्रमित बनेकोे व्यवसायी घिमिरे बताउँछन् । खुल्ला दिसापिसाबका कारण यस क्षेत्रमा बेला बखत संक्रमण नै फैलिने गरेको उनले बताए ।
‘केही समयपहिले पोखरामा फैलिएको डेंगुको संक्रमणको इपिसेन्टर (उद्गम क्षेत्र) पनि यही हो,’ उनले भने । ‘यसै क्षेत्र अन्तर्गतको वडा ८ र ९ पोखराको सबैभन्दा बढी संक्रमित क्षेत्र हो, यसै क्षेत्रबाट सयौंको संख्यामा संक्रमित भए ।’
बल्ल शौचालय योजना
बढ्दो शहरीकरणलाई मध्यनजर गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले पोखराका मुख्यमुख्य स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण अभियान थालेको जनाएको छ । पछिल्लो समय पोखरामा बढ्दो शहरीकरणसँगै महानगरले विभिन्न स्थनमा १२ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय रूपमा खुल्ला दिशामुक्त नेपाल घोषणा गर्दा बल्ल महानगरले चोकचोकमा शौचालय बनाउने अभियान सुरू गरेको हो ।
अघिल्लो वर्ष महानगरले पोखराका विभिन्न स्थानमा १० वटा स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय बनाउने योजना बनाएको थियो । तर, मापदण्डका कारण शौचालय निर्माण अघि बढ्न नसकेपछि यस वर्ष भने जुनसुकै हालमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
महानगरले मापदण्डलगायतका सबै समस्या सुल्झाएकाले यस वर्ष पोखराका मुख्यमुख्य १२ ठाउँमा शौचालय बनाउने तयारी सुरु भएको पोखरा महानगरपालिकाका इन्जिनियर धुव्र भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘हामीले यस योजना अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै सुरु गरेका हौं,’ इन्जिनियर भट्टराईले भने, ‘अघिल्लो वर्ष विभिन्न वडामा जग्गा विवाद र मापदण्डका समस्याह? देखिएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले वर्ष सबै समस्या हल गरिसक्यौं । यस वर्ष सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न महानगर अघि बढेको छ ।’
सरकारले दिसामुक्त देश घोषणा कार्यक्रम हचुवाका भरमा गरेको पोखरा महानगरपालिकाका-९ का वडा अध्यक्ष रामराज लामिछाने बताउँछन् । उनले यस्तो हालतमा खुल्ला दिशामुक्त देश घोषणा गर्नु सस्तो लोकप्रियताबाहेक केही नभएको बताए ।
‘सबै ठाउँमा पर्याप्त शौचालयको व्यवस्था नगरी हतारमा खुल्ला दिशामुक्त देश घोषणा गर्नु हास्यास्पद छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र यस्ता कार्य गरिरहेको छ । वास्तविकता सबैलाई छर्लङ्गै छ ।’
अधिकांश जनप्रतिनिधिकै घरमा छैन शौचालय
शौचालय सफा गर्दैछन् हास्य कलाकार
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १३, २०७६, १६:१४:००